Sidee bay xayawaanku u saameeyaan ugana difaacaan kuleylka? | Saadaasha Shabakadda
Xadka ugu hooseeya ee heer kulka, noolaha waxaa ku sii adkaanaya inuu shaqeeyo. Khubaro ka socota WWF (World Wide Fund for Nature), ayaa ka digaya, iyaguna way dhiman karaan. Kuleylka sare ee aad u saameeya dadka, wuxuu kaloo ku dhacaa xayawaanka. Waxay kuxirantahay nooca iyo noocyada ay tahay, isbeddelada ayaa bilaabanaya in la ogaado. Waxaan ka heli karnaa hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka xoolaha ilaa dhimista dadka ee noocyada ugu nugul.
Waxay sidoo kale saameysaa flora, kuleyl saa'id ah, oo ay la socdaan roob yar, sababaha, tusaale ahaan, ubaxyadii inay qalalaan. Shinnidu ma soo saari karto wax yar oo ubax ah. Waqtiyada sidan oo kale ah, waxsoosaarkan ayaa hoos u dhacaya. Saacadaha ugu horeeya ee maalinta, waxay naftooda u huri karaan uruurinta nectar. Intaa kadib, waa inay iska daayaan, si rugta biyo ugu qaboojiso oo ay u dhexeyso 32-35ºC.
1 Sidee buu u saameeyaa shimbiraha?
2 Sidee loo ilaaliyaa?
3 Sidee bay saameyn ugu leedahay xamaarato?
4 Sidee ayuu saameyn ugu leeyahay kalluunka?
Sidee buu u saameeyaa shimbiraha?
Mawjad kuleyl ah xilliga ay jiraan wax soo saarid, ayaa sababa in noocyada korinaya carruurtooda, ay aad ugu kacayso iyaga inay helaan biyo. Iyadoo ay yar yihiin dadka cabi kara cabitaanka, waxay keentaa kororka tamarta si loo helo biyo badan oo toosiya. Taasi waxay saameyn toos ah ku leedahay tirada digaagga nool.
Waxaa sidoo kale la arkaa in shimbiraha ku xiran dhulka cawska, iyadoo kororka heer kulka, ay cagaar yar yihiin. Taranka shimbiraha ayaa dhacaya, iyo barbar dhigga sidoo kale shimbiraha cayayaanka. Kuwa dambe waxay kuxiran yihiin qadarka ubaxyada jira.
Sidee loo ilaaliyaa?
Dhinac shimbiraha Waxay u isticmaalaan caleentooda sida qaboojiye. Waa nidaam aad ugu badan noocyada badan. Tusaale ahaan, dadku waxay u isticmaalaan timaheena qaboojiye ahaan qayb ahaan xagaaga, si heer kulku uusan kor ugu kicin. Si siman iyo garasho ahaanba wuxuu inaga ilaaliyaa qabowga xilliga qaboobaha.
Shimbiraha magaalooyinka waxay leeyihiin fursad wanaagsan oo ay ku noolaadaan magaalooyinka. Badanaa waxaa jira meelo cunto iyo biyo joogto ah, sida kan waraabka loo isticmaalo. Taasi waxay u sahlaysaa iyaga inay barwaaqoobaan. Habka ugu wanaagsan ee looga caawin karo yareynta saameynta kuleylka ku dhaca shimbiraha waa in la dhigo kuwa wax caba ama dheriyo biyo ah.
Guud ahaan, xayawaanku waxay ula falgalaan kuleylka si la mid ah sida dadka. Waxay hoos u dhigaan heerka shaqadooda, waxay magan u yihiin hooska, iyo dhibaatooyinka dheef-shiid kiimikaadka waxay ka soo baxaan heerkulka sare. Waxaa jira qaar sidoo kale, sida eeyaha, kuwaas oo aad ugu nugul kuleylka sida aan fileyno. La'aanta awood u lahaanshaha dhididka si ay isu qaboojiso, waxaan arki karnaa sida ay dhulka ugu seexdaan iyagoo raadinaya qabow, iyagoo hinraagaya.
Sidee bay saameyn ugu leedahay xamaarato?
Iyaga dhexdooda waxaan ka helaynaa, laga bilaabo qiyaastii 32ºC centigrade waxay ku saameysaa galmada markay wax dhalayaan. Taasi waa in la yiraahdo, dumar badan ayaa dhasha. Isku dheelitirnaanta inta badan ka dhexeysa labada jinsiba wey is beddelaysaa.
Waa xayawaan hawadu ku jirto, iyagu ma dhalin karaan kuleylkooda. Sida heerkulku hooseeyo, falcelintooda dheef-shiid kiimikaad hoos ayey u dhacdaa oo dhaqdhaqaaqooda dhaqdhaqaaquna wuu yaraadaa, waxay u nugul yihiin heer-kul sare Kiiskan, falcelinta kiimikada ayaa isu dheellitirnaan la'aan ah iyo waxqabadka borotiinnada ku lugta leh, enzymes, waa la beddelay ama xitaa waa la dhimi karaa.
Sidee ayuu saameyn ugu leeyahay kalluunka?
Marka heerka heerkulka biyuhu kor u kaco, waxay u janjeeraan inay u guuraan aagag kale. Shimbiraha badda, oo aynaan hore u soo xusin, ayaa tusaale ahaan lagu waxyeeleeyey halkan. Si aad u raadiso cunto, badanaa waa inay safraan masaafo dheer. Waxayna sidoo kale saameyn ku yeelataa jirkooda iyo jeexjeexooda dhallintooda.
Marka laga hadlayo kalluunka, waa xayawaan inta badan ku nool heer kul aad u deggan. Jawiga hawadu heerkulku aad ayuu u kala duwan yahay, laakiin deegaanka biyaha dhexdiisa kala duwanaanshuhu wuu ka deggan yahay. Sidaa darteed, nooc kasta wuxuu leeyahay "gobolkiisa." Waxaan leenahay xoogaa kalluun ah oo ku noolaan kara biyaha barafka ee tiirka, iyo kuwo kale oo ku jira biyo aad u kulul. Laakiin kala duwanaanta heerkulka biyaheeda ayaa si toos ah u saameyn doona dadkeeda. Haddii ay gabaad ka heli karaan aag kale, waxay, ka soo horjeedaan, kor u kaca ama hoos u dhaca heer kulka ayaa sababaya in dadkoodu ka yaraadaan heerkiisa heer kulka ugu wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Sidee bay xayawaanku u saameeyaan ugana difaacaan kuleylka?